နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကာတာနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီး ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ | NLD
Home Appointment နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကာတာနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီး ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကာတာနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီး ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
Posted By: mygate wayon: October 24, 2017 In: AppointmentNo Comments
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ကာတာနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီး H.E. Soltan Bin Saad Al Muraikhi ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ယနေ့နံနက် ၁၁ နာရီ ၁၅ မိနစ်တွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၌ လက်ခံ တွေ့ဆုံသည်။
တွေ့ဆုံပွဲသို့ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့်အတူ ဒုတိယ၀န်ကြီး ဦးကျော်တင်နှင့် တာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ကြပြီး ကာတာနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ ၀န်ကြီးနှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကာတာနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Hassan Bin Mohamed Rafei AL- Emadi လည်းတက်ရောက်သည်။
နိုငျငံတျော၏ အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ ကာတာနိုငျငံ၊ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာန ဒုတိယဝနျကွီး ဦးဆောငျသညျ့ ကိုယျစားလှယျ အဖှဲ့အား လကျခံတှဆေုံ့
နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ၊ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာန ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ သညျ ကာတာနိုငျငံ နိုငျငံခွားရေး ဝနျကွီးဌာန ဒုတိယဝနျကွီး H.E. Soltan Bin Saad Al Muraikhi ဦးဆောငျသညျ့ ကိုယျစားလှယျအဖှဲ့အား ယနနေံ့နကျ ၁၁ နာရီ ၁၅ မိနဈတှငျ နပွေညျတျောရှိ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာန၌ လကျခံ တှဆေုံ့သညျ။
တှဆေုံ့ပှဲသို့ နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျနှငျ့အတူ ဒုတိယဝနျကွီး ဦးကြျောတငျနှငျ့ တာဝနျရှိသူမြား တကျရောကျကွပွီး ကာတာ နိုငျငံ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာန ဒုတိယ ဝနျကွီးနှငျ့အတူ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ကာတာနိုငျငံသံအမတျကွီး H.E. Mr. Hassan Bin Mohamed Rafei AL- Emadi လညျး တကျရောကျသညျ။